शिक्षालय मासेर मन्त्रालय NewsButwaltoday
सरकारले शिक्षालाई संविधानमै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षालाई टेकेर कुनै पनि राष्ट्ले विकासको पूर्वाधार स्थापना गर्छ तर लुम्बिनी प्रदेश सरकार भने शिक्षालय मास्नका लागि उद्दत देखिएको छ । पहिलोपटक बुटवलमा अस्थायी राजधानी तोकिएसँगै रुपन्देहीकै जेठो विद्यालय बुटवल माध्यमिक विद्यालय मास्न कस्सिएको प्रदेश सरकार अहिले स्थायी राजधानी बनेसँगै देउखुरीका शिक्षालय मास्न कस्सिएको छ ।
विद्यार्थी राजनीतिबाट उठेका नेताको रुपमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको परिचय छ । विद्यार्थी राजनीतिमा रहँदा उनले प्राविधिक र रोजगारीमूलक शिक्षाको भाषणले नतमस्तक पारिदिन्थे । अहिले पनि प्रदेश सरकार प्राविधिक सीप भएको प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि काम गरिरहेको दाबी मुख्यमन्त्रीले गर्दै आएका छन् ।
तर त्यही प्राविधिक धारको शिक्षालय उनकै नेतृत्वमा मासिने प्रयत्न शुरु भएको छ । विद्यार्थी राजनीतिबाट प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पदमा पुगेको शंकर पोखरेलको सरकार नै शिक्षालय मास्न कस्सिनुले मुख्यमन्त्री माथि नै अनगिन्ती प्रश्न र आंशका जन्मिएका छन् ।
यद्यपी शैक्षिक संस्थामाथि आक्रमण भएपछि प्रदेश सरकारको उक्त कदमको शिक्षाकर्मीबाट विरोध भएको छ । राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ मा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय र गढवा गाँउपालिका वडा नम्वर १ गोवरडिहा स्थित सरसस्वती माध्यमिक विद्यालयलाई मास्नेगरी प्रदेश सरकारको मन्त्रालय सार्ने तयारी छ । प्राविधिकि शिक्षालय रहेको स्थानमा सरकारले देखाउनको लागि एउटा मन्त्रालय सारेको छ । तर उक्त मन्त्रालय अलपत्र अवस्थामा छ ।
प्रदेश राजधानीको स्थायी संरचना निर्माण नहुँदै मन्त्रालयहरु सार्ने तयारी भएपछि संचालनमा रहेका एक प्राविधिक शिक्षालय र एक विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।
चालु अवस्थामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई अन्यत्र सार्न दाबाब दिदै त्यहाँ मन्त्रालय राख्ने सरकारको योजना रहेको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरु बताउँछन् । यद्यपी प्राविविधिक शिक्षालयलाई नै तत्काल सार्न नसकिने भन्दै शिक्षालय प्रमुखले अन्य बैकल्पीक व्यवस्था गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा तत्कालै अस्थायी संरचना प्रयोगगरि स्थानान्तरण गर्न लागिएका लुम्बिनी प्रदेशका केही मन्त्रालयहरु राप्ती प्राविधिक शिक्षालय स्थानान्तरण हुन सकेको छैन ।
प्राविधिक शिक्षा प्रयोशाला र कक्षा कोठावीना कसरी चल्छ ? शिक्षालयका विद्यार्थी तथा शिक्षक प्रश्न गर्छन । उनहीहरुले सिटिभिटीले प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर भनेको भएपनि शिक्षालयको सम्पतीको मूल्याकन नभएको शिक्षालयको भनाई छ । सिटिइभिटी संघ मार्फत संचालन छ भने प्रदेश र संघ विचको समन्वय नहुँदा शिक्षालयका कर्मचारीहरु मुख्यमन्त्रीको चेपुवामा परेको छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङ, प्रदेश प्रमुख सचिव भरतमणि सुवेदी लगायतले मान्छे लगाएर शिक्षालय सारी मन्त्रालय राख्नका लागि दवाव दिइरहेका छन् ।
यद्यपी उक्त भवन समेत शिक्षालयका लागि आवश्यक संरचनाहरु नपुग्ने भएका कारण तत्कालै स्थानान्तरण गर्न नसकिने अवस्था छ । यस अवस्थामा प्राविधिक शिक्षालय सारेको अवस्थामा कहाँ संचालन गर्ने भन्ने अन्यौल देखिएको छ । सिटिइभिटीबाट संचालित शिक्षालय सार्ने निर्णय भए पनि सिटिभिटी मार्फत स्थानान्तरणमा पहल गरिनु पर्ने शिक्षालयका प्रिन्सीपल चौधरी बताउँछन् । हामी जहाँ जान पनि तयार छौं उनले भने, तर हामीलाई प्राविधिक रुपमा शिक्षालय चलाउने भवन चाहियो । चौर र रुखमुनि राखेर प्राविधिक शिक्षा संचालन गर्न नसकिने उनको भनाई थियो ।
शिक्षालय स्थानान्तरण व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार यसै आर्थिक वर्षमा रु १५ करोड वजेट समेत विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
तत्कालका लागि प्राविधिक शिक्षालय स्थानान्तरणमा समस्या देखाएको छ, उता प्रदेश सरकारले हाल अस्थाइ मुकामवाट सरकारी भवनवाट संचालनमा आएका मन्त्रालय स्थायी राजधानी देउखुरीमा भाडामा लिइ संलाचन गर्दा प्रदेश सरकारलाइ भार बढ्ने भएको छ । त्यसैगरी अस्थाइ जग्गामा बनेका घर र बलियो संरचना भएको हुँदा घर भाडा लिन समेत समस्या भएको राजधानी व्यवस्था कार्यालय दाङ देउखुरीका प्रमुख ज्ञवालीले बताए ।
अपडेट : 2021-07-24 14:33:30